Ku simaha Madaxweynaha dalka oo kulan la yeeshay wefdi ka socda Qaramada Midoobay”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulanka maanta gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ahna ku simaha Madaxweynaha dalka uu la qaatay xubno ka socday Qaramada Midoobay oo uu hogaaminayo madaxa hay’adda Barnaamijka Horumarintya Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay sidii Qaramada Midoobay ay uga qeyb qaadan laheyd horumarinta Baarlamaanka Soomaaliya iyo Baarlamaanada maamul goboleedyada dalka.
Kulanka ayaa ka dib ayaa waxaa si wada jir ah warbaahinta qaranka ula hadlay gudoomiiyaha Baarlamaanka ahna ku simaha Madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” iyo madaxa hay’ada UNDP Soomaaliya.
Madaxa Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya George Conway ayaa ugu horeyn sheegay in Qaramada Midoobay ay diyaarisay mashqruuc lagu horumarinayo Baarlamaanka Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada dalka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka ahna ku simaha Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan ‘’Jawaari’’ayaa sheegay in wafdigan ka socday Qaramada Midoobay ay la saxiixdeen mashruuc ku saabsan horumarinta Baarlamaanka Soomaaliya iyo Baarlamaan goboleedyada Soomaaliya.
“Waxaa noo suurtagashay in aan la saxiixno heshiis lagu horumarinaayo Baarlamaanka federaalka iyo kan maamulada dalka hay’adda UNDP waana markii ugu horeysay oo heshiis lagu taageeraayo Baarlamaanka Soomaaliya” ayuu yiri Jawaari.
Gudoonka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira dardar gelinta howlaha Baarlamaanka Soomaaliyeed iyadoo taasi ay qeyb ka tahay gaarida hiigsiga sanadka 2016-ka.
Golaha Wasiirada oo ka doodaya qorshaha Xukuumadda ee 100-ka Maalmood "SAWIRRO"